Iindaba - Iindaba zeNkampani
Ukulungiselela ukuphumeza ngcono ulawulo olungqongqo, ukuphucula izakhono zokusebenza, kunye nokwandisa izimvo zokusebenza, nge-15 ka-Matshi 2020, abasebenzi abasebenza phambili kwimveliso baququzelelwa ukuqhuba uqeqesho olulandelayo lweveki. Umxholo ophambili kolu phononongo ubandakanya iinxalenye ezimbini: amandla okusebenza kwemisebenzi yabasebenzi bemveliso kunye nolawulo lwesiza. Ngentsasa ye-16, phantsi kobunkokeli bemveliso, wenza utyelelo olucwangcisiweyo kunye nokufunda. Emva kwemini, wafunda umsebenzi ngokwendlela yokutshintsha, ehambelana nezakhono zokusebenza kunye nolawulo lwesiza sendawo. Kuyo yonke inkqubo yokufunda, abasebenzi befektri yethu bayaqeqeshwa, bafunde ngokunyanisekileyo, bacele iingcebiso ngokuthobekileyo, kwaye babonakalise umoya olungileyo.
Ngo-Meyi we-10, 2020, kwagqitywa ekubeni kongezwe oomatshini bokuprinta iimpahla kunye neetreadmill. Ukuze uprinte ngcono iintlobo zepateni ezikumgangatho ophezulu, inokusetyenziswa nakwizinto ezahlukeneyo zelaphu. Ukusuka ngaphakathi ukuya ngaphandle, inika umntu oyinxibileyo ukhuseleko oluqinisekileyo nolonwabileyo. Ngokomgangatho, ukufuna ukhuseleko, ukungapheli, ukubuyiselwa okuphezulu, ukulawula okungcono komgangatho, kunye nokufuna rhoqo utshintsho kunye nezinto ezintsha ekusebenzeni, izitayile kunye nezinto zokwakha, ukwenza iimveliso ezingcono.
Ukulungiselela ukuphucula izakhono zokusebenza kunye nemibono yokusebenza, nge-14 kaSeptemba 2020, vumela abasebenzi abafanelekileyo bathathe inxaxheba kwizifundo zolwazi ezisisiseko, owona mxholo uphambili wokufunda yeyona nkqubo yokusebenza yomxholo osisiseko kunye nemibono enxulumene nolwazi lwangaphakathi lwethiyori. Ukhuphiswano lolwazi phakathi kwabo lwenza ukuba ulwazi lomzi mveliso wakhe luqine kwaye lube nzulu. Kwimeko yokuphumla neyesoyikiso, abasebenzi baya kuba nokuqonda okungcono, kwaye owona msebenzi uwenzileyo emva kwemini uya kubenza basebenze ngakumbi kwaye basebenze ngakumbi.
Ixesha Post: Nov-18-2020